E-Journal: Just for Smile!
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။ ဖုန်းပြောရင်း သူပြောလိုက်တာလေးက ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ် ကလေးဘဝက ဆော့ခဲ့ကြတာလေးတစ်ခုကို ပြန်သတိရတာသွားစေလို့လေ။ ပြောပြအုံးမယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆော့ခဲ့ကြတာ အမျိုးကိုစုံလို့ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုဆော့ရင်း တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြောနေတဲ့စကားကို တခြားလူတွေ ရုတ်တရက် နားမလည်အောင် စကားတွေကို ဝှက်ပြီးပြောကြတာ။ ကလေးဆိုတော့လည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ ပြောကြတာပေ့ါ။ စကားတွေကို ပြောင်းပြန်ပြောတာလေ။ အတော်များများလည်း ပြောခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းလို့ တချို့ဆို အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နောက်ပြောင်ရင် အဲဒီနည်းလေးကို သုံးနေကြတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကလည်း ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ အဲဒီလိုလေးနောက်သွားတယ်။ သဘောကျလို့ ပြန်ပြောပြအုံးမယ်။ သိတယ်ဟုတ် စကားလုံးလေးတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းပြန်ပြောတယ်ဆိုတာ။
ဒီလိုလေဗျာ…. ဥပမာပေါ့ …..
သူငယ်ချင်း …ဆိုရင် သငင်းချယ်။
သွားစို့ …ဆိုရင် သို့စွား။
ငယ်ငယ်ကတည်းက လူပျိုဖြစ်ချင်နေသူတွေများဆို ချယ်တစ် …ချစ်တယ်။ ဒီလိုလေးတွေတောင်ပြောပြီး ကောင်မလေးတွေကို နောက်တတ်ကြတယ်။
ကြည့်မရတဲ့ကောင်ဆိုရင်လည်း ပြောချလိုက်တာ မကြားတကြား၊ ခေါင်ကွေး …ခွေးကောင်ပေါ့။ ပြန်ပြောပြနေရရင်တော့ အများကြီးဗျ။ စိတ်ဝင်စားရင် ပြောချင်နေတဲ့စကားလေးတွေကို ပြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းပြောပြသွားတဲ့ စကားလေးကို မျှဝေအုံးမယ်။ စဉ်းစားစရာလေးလဲ ပါသွားလို့ဗျ။ နောက်ပြီး သူပြောလိုက်တာကို ကြားကြားခြင်း ရယ်လိုက်ရတာ၊ သူပြန်ပြောမှပဲ ဟုတ်နေသလိုလို။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ပက်ရင် တိုးတက်လှပါပြီဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် သူတို့အစိုးရတွေကို ပြည်သူတွေက သိပ်ယုံတာမဟုတ်ဘူး ဆိုကြတယ်ကိုး။ ပါတီ အာဏာမရခင်၊ သမ္မတမဖြစ်ခင်တော့ ကတိတွေအထပ်ထပ်ပေး။ တို့နိုင်ငံ တို့လူမျိုးအတွက် ဘာလုပ်မလေး၊ ညာလုပ်မလေးပေါ့ဗျာ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာကျတော့ သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်သွားကြတယ်။ သူတို့တွေ နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာရရေး၊ ထင်ပေါ်ရေးကိုပဲ လုပ်သွားကြတတ်လို့ အစိုးရဆိုတာကြီးကို သိပ်ယုံကြဘူးတဲ့ဗျ။ အဲလိုမျိုးတွေ ဖတ်ဖူးကြားဖူးထားပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ချင်သူ၊ ရိုးသားမှုကို မြတ်နိုးသူလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်လုပ်လိုက်မှ စကတည်းက ယဉ်သကိုလို့ပဲ ပြောရမလား၊ စကားလုံးကြီးကိုက နာမ်စီးနေပြီးသားလို့ ပြန်စဉ်းစားရမလား၊ စဉ်းစားစရာကိုဖြစ်လို့ဗျို့။
သူပြောသွားတာက အစိုးရ …ဆိုတာ အစရိုးတဲ့။ အစမှာပဲရိုးသတဲ့ဗျာ။ ကဲကောင်းရော။ နောက်များဆိုရင် ….. ..။
မှတ်ချက်-“”- အစရဲ့နောက်ပိုင်းကို ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောပါ။…..။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:35 PM
ကျွန်တော်တို့ လ/ထကထိက၊ ကထိက စသဖြင့်တွေ တိုးနေတာလည်း ကိုသုခမိန်ပြောသလို တွေးကြည့်လိုက်တော့ ရူးတာတွေ တိုးတိုးလာတာပဲဗျာ့။
တကယ်က အစကလည်း မရိုးဘူး...
ခေါင်ကွေး... ချယ်တစ်.... ဟား...ဟား....ဟား
ကိုယ်တင်ပြောတာမှတ်တယ်.... သူတို့လည်း ပြောသကိုး